खुसी हुन प्रियंका र आयुष्मानसँग सिक्ने कि ! « Ramailo छ
खुसी हुन प्रियंका र आयुष्मानसँग सिक्ने कि !
प्रियंका कार्की र आयुष्मान जोशी सबैको नजरमा पर्ने प्रेम जोडी हुन् । आयंका कप्पल आफ्नो प्रेम सम्बन्ध बारे कुनै पनि कुरा खुपचुप राख्दैनन् । छिट्टै बिवाह गर्न लागेका प्रियंका र आयुष्मानको जोडीलाई धेरैले आइडलको रुपमा पनि हेर्छन् ।
आइडल कप्पल ले हालै इन्स्टाग्राममा एउटा फोटो पोष्ट गरेका छन् । स्विमिङ पुलमा आयुष्मानले प्रियंकालाई उचालेको फोटो हेर्न लायक त छ नै । उक्त फोटोमा प्रियंकाले लेखेका क्याप्सन पनि पढ्न लायकको छ । ‘सबै कुरामा सन्तुलन हुनु भनेको खुसी हुनु हो’, प्रियंकाले उक्त फोटोमा यस प्रकारको क्याप्सन लेखेकी छन् । फोटो र क्याप्सनको तारतम्य कत्तिको मिल्यो ? तपाईं आफैं मूल्यांकन गर्नुस् । प्रियंका र आयुष्मानसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
प्रियंका र आयुष्मानले दुई फिल्म ‘कथा काठमाण्डू’ र ‘चंगा चेट’मा अभिनय गरेका छन् भने यतिबेला ‘प्रेम दिवस’को छायाँकनमा व्यस्त छन् । व्यस्त समयमा पनि उनीहरु मस्ती गर्न भुल्दैनन् भन्ने उदाहरण हालैको यस फोटोले देखाएको छ ।